Muuri News Network » Faah Faahin: Weerarkii xalay ka dhacay Degmada Muuri
Faah Faahin: Weerarkii xalay ka dhacay Degmada Muuri
Sep 15, 2016 - Comments off
Waxaa shalay iyo maanta dagan jawiga Guud ee Degmada Muuri ee Gobolka shabeelaha Hoose kadib markii uu dagaal culus ka dhacay halkaasi.
Ciidamo afka soo Duubtay oo isugu jiray kooxaha argagixida Alshabaab iyo mooryaan taagersan fikirka Al shabaab ayaa weerar ku soo qaaday degmada Muuri waxa ayna haysteen wax kudhaw saacad iyagoo gubay Ceel biyood ay dadka deegaanka Biyaha ka cabijireen.
Waxaa Sidoo kale ay gubeen guryo ay lahaayeen Saraakiisha kala ah Nuur Uldheere iyo Diite, iyagoo sidoo kale bililiqeystay guriga Diite inta aysan gubin ka hor.
Intaas kadib waxaa gurmad ballaaran soo gaaray degmada Muuri iyagoo ka soo kicitamay Deegaanada Fida Muuse iyo Nambar Konton, Ciidamda Mujaahidiinta ah ee Gurmadka ku yimid waxaa hogaaminayay Corneel Axamd Cabdullahi Cusmaan( Axmed Qaqable).
Corneelka iyo ciidamda uu watay waxa ay awood kaga saareen Degmada Mooryaantii indhaha soo duubtay, iyagoo qasaara weyn halkaasi ku gaarsiiyay.
Ciidamda ayaa dhufeesyo adag ka sameystay afarta dhinac ee magaalada, waxaana la waayay halka ay jaan iyo cirib dhigeen mooryaantii weerarka soo qaaday.
Ciidamda Deegaanka ee ku sugan Gobolka shabeelaha ayaa ah mujaahidiin u huray naftooda iyo xoogooda in ay ku difaacaan dadkooda iyo dalkooda, waana ciidamo aad u tababaran oo ay ka go’antahay xureynta iyo difaaca dadkooda.
Ugu danbeyntii waxaa gebi ahaan degan xaaladda degmada Muuri iyadoo dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodka dadweynaha uu si caadi ah u bilowday.
Ishawararka oo dhan